Iindaba ze-iPad 2x14 I-Podcast: iOS 9.2, iwOSOS 2.1, i-OS X 10.11.2 kunye ne-tvOS 9.1 | IPhone iindaba
2 × 14 I-Podcast ye-iPad yanamhlanje: iOS 9.2, iwOSOS 2.1, i-OS X 10.11.2 kunye ne-tvOS 9.1
Kule veki kwipodcast yethu sihlalutya iindaba zeenguqulelo zamva nje ezikhutshwe kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo zazo zonke iinkqubo zokusebenza kweApple. IOS 9.2 kunye neenoveli zayo kwiApple Music, i-tvOS 9.1 ethi izise inkxaso kwisicelo esikude se-iOS, i-watchOS 2.1 kunye ne-OS X 10.11.2. Ukongeza sikwanika uluvo lwethu kwityala elitsha le-Apple kunye nayo yonke imicimbi yeveki. Ngaba uza kuyiphosa?
Mamela »2 × 14: IOS entsha, i-tvOS, iwotsOS, i-OS X kunye nokunye» kwiSpreaker.
Bathatha inxaxheba kwesi siqendu:
Jordi (@jordi_sdmac), umququzeleli weSoy de Mac kunye nomhleli weActualidad Gadget
Nacho (@nastiolo), umhleli weActualidad iPad, iActualidad iPhone, iSoy de Mac kunye neActualidad Gadget
Luis (@luispadillablog), umququzeleli we-Actualidad iPad kunye nomhleli weActualidad iPhone kunye neActualidad Gadget
Kwakhona Sikhupha uluhlu olutsha lwadlalwayo ngeli xesha lonyaka onokululandela ukuba uyafuna kwi-Apple Music (unxibelelwano). Sikwanoluhlu lwethu kunye nomculo osuka kwixesha lokuqala lepodcast yethu kwiApple Music (unxibelelwano).
Veki nganye siza kuba nepodcast yethu kwaye ungayilandela bukhoma Ispreaker, ukuthatha inxaxheba kwizimvo zakho kwingxoxo kwaye ngokuqinisekileyo umamele naphi na xa ufuna ukungena iTunes. Silindele wena.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » podcast » 2 × 14 I-Podcast ye-iPad yanamhlanje: iOS 9.2, iwOSOS 2.1, i-OS X 10.11.2 kunye ne-tvOS 9.1
Le webhsayithi ikuvumela ukuba ulinganise izinto nge-3D Touch screen ye-iPhone 6s
I-Apple yongeza indawo ezintsha zaseSpain neMexico kwiiMephu